Microsoft Edge Chromium တွင် Chrome extension များထည့်သွင်းနည်း Gadget သတင်း
Microsoft Edge Chromium တွင် Chrome extension များထည့်သွင်းနည်း
မိုက်ခရိုဆော့ဖ်သည်မိုက်ခရိုဆော့ဖ်အား Microsoft Edge ကို Windows 10 ဖြင့်စတင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် Internet Explorer ကိုမေ့သွားစေရန်ပြုလုပ်ထားသော browser တစ်ခုဖြစ်သည် သံလက်ဖြင့်စိုးစံလေ၏ ၉၀ ပြည့်လွန်နှစ်များနှောင်းပိုင်းမှ ၂၀၁၂ ခုနှစ်အထိ Google Chrome သည် Internet Explorer ထက်သာလွန်ပြီးကမ္ဘာပေါ်တွင်အသုံးအများဆုံး browser ဖြစ်လာသည်။
နှစ်များကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှ Chrome ၏အုပ်ချုပ်မှုသည်ဆက်လက်တည်ရှိပြီးလက်ရှိဘရောက်ဇာမှတစ်ဆင့်အင်တာနက်ချိတ်ဆက်သောကွန်ပျူတာ ၄ ခုအနက် ၃ ခုတွင်တွေ့ရှိရသည်။ Edge ဖြင့် Microsoft သည်စာမျက်နှာကို Internet Explorer ဖြင့်ဖွင့်ချင်ရုံတင်မကဘဲ၊ Chrome ကိုထပါ။ သို့သော်သူမအောင်မြင်ခဲ့ပါ။
နှစ်များကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှတစ်စုံတစ်ရာမှားယွင်းကြောင်း Microsoft သတိပြုမိခဲ့သည်။ Edge ကကျွန်တော်တို့ကိုတင်ပြခဲ့တဲ့အဓိကပြproblemနာကတော့သူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မှာသာမကဘဲ၊ တိုးချဲ့ခြင်းမရှိခြင်း။ Edge သည် extensions များနှင့်လိုက်ဖက်ကြောင်းမှန်သော်လည်း Chrome ရှိအရေအတွက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက၎င်းအရေအတွက်သည်အလွန်ကန့်သတ်ပြီးအလွန်ကန့်သတ်ထားသည်။
တစ်ခုတည်းသောဖြေရှင်းချက်မှာ Chromium အခြေပြု browser အသစ်တစ်ခုကို scratch မှအသစ်တစ်ခုတည်ဆောက်ရန်ဖြစ်သည်။ Chrome နှင့် Opera နှစ်ခုလုံးတွင်ရရှိနိုင်သောအင်ဂျင်ကိုအတူတူပင် Firefox နှင့် Apple Safari နှစ်ခုလုံးသည် Gecko ကိုအသုံးပြုကြသည်။
၂၀၂၀ ဇန်နဝါရီတွင် Microsoft သည် Edge အသစ်၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းကိုထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ယခင်ဗားရှင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အလွန်အရေးကြီးသောဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကိုဖော်ပြသည့်ဘရောက်ဇာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ပိုမိုမြန်ဆန်သည်သာမကကျွန်ုပ်တို့နှင့်ငါတို့၏ခြေရာခံခြင်းကိုကာကွယ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အားမတူညီသောနည်းလမ်းများလည်းပေးထားသည် အားလုံး extension များနှင့်သဟဇာတဖြစ်ပါတယ် ငါတို့လက်ရှိရှာတွေ့နိုင်ပါသည် Chrome ဝက်ဘ်စတိုး။
1 Microsoft Edge ခရိုမီယမ်ထည့်သွင်းနည်း
2 Extension များကို Microsoft Edge တွင်တပ်ဆင်ပါ
3 Microsoft Edge Chromium တွင် Chrome extension များထည့်သွင်းပါ
4 Microsoft Edge Chromium တွင် extensions များကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်
Microsoft Edge ခရိုမီယမ်ထည့်သွင်းနည်း
Microsoft Edge ၏ဗားရှင်းအသစ်ဖြစ်သော Windows 10 တွင်ပေါင်းစပ်ထားသော browser တစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်သည်သင်၏ Windows 10 ၏မိတ္တူကို update လုပ်ပါလျှင်၊ အများအားဖြင့်သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာအဲဒါကို install လုပ်ပြီးသားဖြစ်တယ်။ မရရှိလျှင်, သင်အားဖြင့်ရပ်တန့်နိုင်ပါတယ် သာတရားဝင် link ကို ၎င်းကိုအပြည့်အ ၀ အာမခံချက်ဖြင့်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်တရားဝင် Microsoft စာမျက်နှာတွင်တွေ့သော link ကိုနှိပ်ပါ။
link ကနေ Windows 10 အတွက် version နှစ်ခုလုံးကို download လုပ်လို့ရပါတယ် Windows7နှင့် Windows 8.1 အတွက်ဗားရှင်းအပြင် macOS အတွက်ဗားရှင်းEdge ၏ထုတ်ဝေမှုအသစ်သည်လွန်ခဲ့သည့် ၁၀ နှစ်မှစ၍ desktop operating systems အားလုံးနှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်။
ငါအရာရှိတ ဦး ကပြောတဲ့အခါ, ငါသငျသညျရှိသည်ဟုဆိုလို ကျွန်တော်တို့ကို Microsoft Edge ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်ခွင့်ပြုသည်ဟုပြောဆိုသောဝဘ်စာမျက်နှာများအားလုံးကိုသတိထားပါ သူတို့ဆော့ဖ်ဝဲ၏ပိုင်ရှင်များဖြစ်သကဲ့သို့သူတို့၏ဆာဗာမှ။ ကျွန်ုပ်တို့သံသယဖြစ်ရပါမည်၊ အကြောင်းမှာအချိန် ၉၉%၊ installation ဆော့ဖ်ဝဲတွင်တပ်ဆင်စဉ်အတွင်းလုပ်ဆောင်ရမည့်အဆင့်အားလုံးကိုမဖတ်ပါကထည့်သွင်းမည့်အခြားဆော့ဝဲလ်များပါ ၀ င်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
Extension များကို Microsoft Edge တွင်တပ်ဆင်ပါ
ခရိုမီယမ်ကိုအခြေခံသော Edge ဗားရှင်းသစ်ကိုဖြန့်ချိသည့်အချိန်တွင် Microsoft ကသူအားကိုယ်ပိုင်တိုးချဲ့မှုများကိုပေးခဲ့သည်။ ကျွန်တော် Microsoft Store တွင်ရှာနိုင်သည်။ ဘရောင်ဇာမှ ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည် browser ၏ညာဘက်အပေါ်ထောင့်ရှိအလျားလိုက်အချက်သုံးချက်ကို နှိပ်၍ extensions များကိုရွေးချယ်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် configuration options ကိုသုံးရမည်။
ကိုယ်ပိုင်တိုးချဲ့မှုများတွေ့သည့် Microsoft Store ၏အခန်းသို့ဘရောင်ဇာမှကိုယ်တိုင် ၀ င်ရောက်ရန်ဘယ်ဘက်ကော်လံကိုသွားပြီးအပေါ်ကိုနှိပ်ပါ။ Microsoft Store မှ extensions များကိုရယူပါ.
ထိုအခါမိုက်ကရိုဆော့ဖ်မှတိုက်ရိုက်ရရှိနိုင်သောတိုးချဲ့မှုအားလုံးကိုပြလိမ့်မည်၊ သူတို့ကလုံခြုံရေးစစ်ဆေးမှုများလွန်ပါပြီ မိုက်ကရိုဆော့ဖ်မှမိုက်ကရိုဆော့ဖ်အက်ပလီကေးရှင်းစတိုးတွင်ရရှိနိုင်သည့်အပေါငျးတို့သလို ဘယ်ဘက်ကော်လံတွင် application အမျိုးအစားများကိုတွေ့ရပြီးလက်ယာဘက်ကော်လံတွင်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။
မည်သည့် extensions များကိုမဆို install လုပ်ရန်၎င်း၏အမည်ကိုနှိပ်ရုံသာဖြစ်သည် Get ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ ဒါကြောင့်ငါတို့ရဲ့ Microsoft Edge Chromium မိတ္တူကိုအလိုအလျောက် install လုပ်လိမ့်မယ်။ ထည့်သွင်းပြီးသည်နှင့် Chrome နှင့် Firefox နှင့်အခြားသော browser များမှ extensions များတပ်ဆင်ရန်ခွင့်ပြုလိုက်သည်နှင့်၎င်း၏ icon သည် search bar ၏အဆုံးတွင်ဖော်ပြလိမ့်မည်။
Microsoft Edge Chromium တွင် Chrome extension များထည့်သွင်းပါ
Microsoft Edge အသစ်တွင် Chrome extensions များကိုတပ်ဆင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ပထမ ဦး ဆုံး Microsoft ကိုယ်တိုင်ကမ်းလှမ်းသည့် extensions များကို install လုပ်နိုင်သည့်တူညီသော ၀ င်းဒိုးကိုအရင်ကြည့်ရမည်။ ထိုဝင်းဒိုး၏ဘယ်ဘက်အခြမ်းတွင် switch ကိုကျွန်ုပ်တို့ activate လုပ်ရမည် အခြားစတိုးဆိုင်များမှတိုးချဲ့ရန်ခွင့်ပြုပါ.
ဒီ option ကို enable လုပ်ပြီးပြီဆိုရင်၊ Chrome Web Store မှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ Chromium အခြေပြု Microsoft Edge ၏ကော်ပီတွင်ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုလိုသော extensions များကိုရှာဖွေတပ်ဆင်ရန်။
ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် extension ကို install လုပ်ဖို့ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ် Netflix ဟာပါတီ, တူညီသောနေရာ၌မရှိဘဲငါတို့သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူတူညီသော Netlix အကြောင်းအရာခံစားရန်ခွင့်ပြုတဲ့ extension ကို။ ကျနော်တို့ extension ကိုစာမျက်နှာပေါ်ရောက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်, အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ Chrome ကိုထည့်ပါ ကျနော်တို့တပ်ဆင်အတည်ပြုပါ။ ထည့်သွင်းပြီးသည်နှင့်၎င်းကိုရှာဖွေရေးအကွက်၏အဆုံးမှာတွေ့လိမ့်မည်။ Edge Chromium တွင်တိုးချဲ့ထည့်သွင်းရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ဂူဂဲလ်အကောင့်နှင့်ဝင်ရောက်ရန်မလိုအပ်ပါ။
Microsoft Edge Chromium တွင် extensions များကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်
ကျွန်ုပ်တို့ယခင် Microsoft Edge တွင်ထည့်သွင်းထားသော extensions များကိုဖယ်ရှားရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည် configuration options ကိုသွားပြီး Extensions section ကိုဝင်ရပါမည်။ ဤအပိုင်းအတွင်း၊ ကျွန်တော်အရင် install လုပ်ခဲ့တဲ့ extension အားလုံးသူတို့ဟာမိုက်ခရိုဆော့၏ကိုယ်ပိုင် extensions များလား Chrome Web Store မှ extension များလား။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာမှဖယ်ထုတ်ပစ်ရန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းသည်အတူတူပင်ဖြစ်သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖယ်ရှားရန်တိုးချဲ့မှုကိုသာသွားရန်လိုအပ်သည် Remove ကိုနှိပ်ပါ လာမည့်ခြေလှမ်းအတွက်ဖျက်ခြင်းကိုအတည်ပြု (extension ၏အမည်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောတည်ရှိသည်) ။ Edge Chromium မှကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းသောအခြားရွေးချယ်မှုတစ်ခုမှာ extension ကိုရပ်ဆိုင်းရန်ဖြစ်သည်။
အကယ်၍ သက်တမ်းတိုးခြင်းကိုရပ်ဆိုင်းလိုက်လျှင်၊ ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘရောက်ဇာမှာအလုပ်မလုပ်တော့ဘူး, ရှာဖွေရေးအကွက်၏အဆုံးမှာ၎င်း၏အိုင်ကွန်ကိုဖော်ပြလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ, ဒါပေမယ့်ငါတို့လိုအပ်တဲ့အခါ၎င်းကိုဖွင့်ဖို့အဆင်သင့်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ ဤရွေးချယ်မှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာတွင်မကြာသေးမီကထည့်သွင်းထားသောချဲ့ထွင်မှုများသည်တင်ပြသောပြproblemsနာများ၏အကြောင်းရင်းဟုတ်မဟုတ်ကိုစစ်ဆေးရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ သင့်တွင်မေးခွန်းများရှိပါကမှတ်ချက်များနှင့်ပျော်ရွှင်စွာထားခဲ့ပါ သူတို့ကိုငါဖြေရှင်းပေးမယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ကွန်ပြူတာများ » Microsoft Edge Chromium တွင် Chrome extension များထည့်သွင်းနည်း
Netflix, Disney + နှင့် HBO တို့ကိုHပြီလတွင်ထုတ်ပြန်သည်